I-Free BF Scalper EA - I-Forex EA ye-Forex | | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaFree Forex EAsI-Free BF Scalper EA
I-Free BF Scalper EA
Umqondo ngemuva kwamahhala I-BF Scalper EA ilula kodwa iyasebenza - i-EA iyasebenzisa ukuphumula we Amabhodi we-Bollinger kokungena nokuphuma kwezimpawu.
Amazinga okulahlekelwa kokuyeka kokuyeka ahluka phakathi kwe-20 ne-60 pips.
Ungasebenzisa i-TP encane ephakathi kwe-4-8 pips noma ushiye i-logic yokuphuma ukuze unakekele isikhundla.
I-logic yokuphuma nayo isekelwe kubonakaliso be-BB futhi izovala ukuhweba ngisho nokulahlekelwa lapho intengo iseduze noma iphula i-BB line ehlukile. Lokhu kubizwa ngu I-BandBreakExit ipharamitha esebenza kahle ukusuka kokungenani kuya kokubili kokubili.
Ikhululekile I-BF Scalper EA inokuvikelwa okusakazekile okuphezulu - lokhu kubalulekile, ngoba uma usebenzisa ama-oda womkhawulo njengesibonelo awukwazi ukulawula lokhu futhi uzothatha imisebenzi ethile nge-10 noma ngisho nama-20 pips asakazwayo - ukuhweba okukodwa okunjalo kuzosusa inzuzo ephakathi yokuhweba okuhle kwe-10 isilinganiso esihle kakhulu solu hlobo lokuhweba ngama-2-3 pips esimweni esihle kakhulu. Lokhu yingakho singasebenzisi ama-oda wemikhawulo.
Isikhathi sesikhathi esikhakanyisiwe: M15
Ama-pair pair currency: GBPUSD, EURUSD, EURCHF, EURAUD, GBPCAD, USDCAD, USDCHF futhi USDJPY
Izilungiselelo ezizenzakalelayo zitholakala I-GBPUSD. Ngizilungiselele ukusetha amafayela amanye amaqembu asekelwayo nawo. Njengoba ngingakwazi ukuzifaka lapha, sicela uxhumane nami, futhi ngizokuthumelela.
Nakhu ukweluleka okulandelayo:
Ungasebenzisi i-algorithm yofuzo
Lungiselela amapharamitha we-2 ngasikhathi sinye - Sandisa eyodwa kuphela ngasikhathi bese sibheka inani elinengqondo kakhulu
Lungiselela okungenani izinyanga ze-6 futhi okungenani uhweba nge-200 - lokhu ubuncane ngokuphelele bokugwema ukujikajikajika bese uthola ezinye izinhlaka ezizwakalayo ezizokwazi okungenani ukuba nethuba lokuthola inzuzo ezimeni zangempela.
Yenza ngemijikelezo eminingi yokufakelwa kwe-5 yawo wonke amapharamitha.
Sebenzisa isinyathelo esifanelekile esikhulu sokukhulisa - njengesibonelo uma ukwengeza ukulahleka kokumiswa, isinyathelo esifanelekile kungaba ama-5 pips hhayi ama-1 pips - cishe i-5% yobubanzi bokusebenziseka obufanele bepharamitha.
Sisebenzisa ukuhlolwa kwentengo okuvulekile kwe-M1 kuwo wonke ama-EA ethu - kulungile ngokwanele.
Asisebenzisi izivivinyo ze-tick njengoba zinokwethenjwa kakhulu.
Futhi manje ingxenye emnandi: Ngokusebenzisa le EA, uyavuma ukuthi ujwayelene nazo zonke izingozi futhi nguwe onesibopho semiphumela yezinqumo zakho. Asemukeli isikweletu kunoma yikuphi ukulahleka okuqondile noma okubangelwa ukuvela komkhiqizo. Kumele kuqashelwe ngokucophelela kulokhu, ukuthi imiphumela edlule ayiyona inkomba yokusebenza kwesikhathi esizayo.
KUBALULEKILE: Naka imikhawulo ye-CTHour1-6! Kubaluleke kakhulu! Ukuze uthole imiphumela efanele, kufanele uyibeke ngokufanele ngokusho kwe-broker yakho ye-GMT Offset. Funda ngokucophelela incazelo yemingcele ngezansi!
AmathikithiThola - uma "kungamanga", i-logic izokhishwa ekuqaleni kwe-M1 bar, uma kungenjalo izokubala futhi ithengise ngophawu olusha lwamanani.
I-StealthMode yeqiniso / yamanga - Ukufihla ukulahleka kokumisa futhi uthathe amazinga wenzuzo ku-logic yohlelo ukubenza bangabonakali kubathengi. Uma usebenzisa le modi, ukulahleka kokumisa bese uthatha ama-oda wenzuzo awatholakali kuseva yokuhweba.
I-EmergencyStopDist - Izinga lesibili lokuvikelwa, lapho kusetshenziswa iStealthMode. Kumanani amakhulu kune-zero, kusebenza isigaba se-True (Emergency) StopLoss ebangeni elikhudlwana kune-StopLoss efihliwe ebonakalayo. Esimweni esinjalo, inani le-StopLoss entsha ephuthumayo izoba yisamba senani le-EmergencyStopDist kanye nenani le-StopLoss efihliwe.
MinEquity - ukulingana okuncane okudingekayo ekuhwebeni.
I-BandPeriod - Isikhathi seBhendi seBollinger.
I-BandBreakIntry - Ukuqhekeka ku-4-pips enamadijithi we-BB ukuqalisa ukuhweba okuphambene (inani lingaba libi).
I-BandBreakExit - Ukuqhekeka ku-4-pips enamadijithi weBB ehlukile ukuqalisa ukuvala ukuhweba okukhona (inani lingaba elibi).
SebenzisaTrendFilter - Shintsha lokhu kuye kube “yiqiniso” uma ufuna ukuhweba kuphela kusiqondisi sethrendi echazwe ama-MA amabili ngezansi.
MA_FastPeriod - Isikhathi esijwayelekile sokuhamba.
MA_SezansiPeridi - Ukuhamba kwesilinganiso okuhamba kancane.
MA_Trend_TF Isikhathi sesikhathi sama-MA womabili.
IsikhathiUkusebenza - ngokuzenzakalelayo, lokhu "kuyiqiniso" ngakho i-EA izohweba kuphela ngamahora abhalwe ngezansi. Uma ungafuni ukusebenzisa isikhathi sokuhlunga, shintsha le pharamitha ibe “ngamanga”.
Amapharamitha Abaluleke Ngaphezulu
I-CTHour1 - 6 - Slots eziyisithupha ezinokwenzeka amahora wokuhweba. Amanani 0 - 23 isebenze slot. Faka inani elikhulu njenge-55 ukuze usebenze kabusha i-slot. Imiphumela emihle kakhulu evela kulwazi lwethu iyatholakala ku-21 naku-22 GMT. Kufanele impela uhambisane nalawa mahora ekushintsheni kwabashintshi bakho be-GMT. Amanani azenzakalelayo ahlehliswa nge-GMT + 2 (isikhathi sasebusika).
NgoLwesithathuShintshaFilter yeqiniso / yamanga - NgoLwesithathu ukushintshana kokuhlunga kukhansela konke ukuhweba ngolweSithathu kusihlwa ngokushintshana okungalungile, uma ukushintshwa kubi kunesilinganiso seMaxNegSwapPips.
MaxNegSwapPips - pus 0.5 pips ibonakala ingumkhawulo onengqondo.
RolloverTimeFilter yiqiniso / amanga - Vula / vala isihlungi sesikhathi se-rollover.
AmaminithiNgaphambi kwalokho - Isikhathi sokuphumula ngaphambi kwamabili, lapho yonke imisebenzi yokuhweba izokhanselwa.
AmaminithiKamuva - Isikhathi sokuphumula ngemuva kwamabili, lapho yonke imisebenzi yokuhweba izokhanselwa.
x_MaxSpreadFilter - vula / vala i-rollover eyengeziwe yokusakazeka isihlungi.
x_MaxSpread - phindaphinda iMaxSpread yokuqala, ezovunyelwa ngokubanzi, ngaphambi kokukhansela yonke imisebenzi yokuhweba. Isibonelo, uma iMaxSpread eyi-6 futhi i-x_MaxSpread iyi-2, yonke imisebenzi yokuhweba izokhanselwa uma ukusakazeka kudlula i-6 × 2 = 12 pips.
I-RecoveryMode - yenza kusebenze ukululama okusondelayo. Isebenza lapho i-AutoMM> 0.
I-FixedLots - inkatho yokuhweba ehleliwe lapho i-AutoMM = i-0.
I-AutoMM - ukuphathwa kwemali. Isibonelo, i-AutoMM = i-5 isho ukuthi i-robot izohweba nge-5% engozini.
Landa i-Free BF Scalper EA
Izimpawu ze-forex zeVladimir & Ukubuyekeza Isibuyekezo Sohlelo
Landa i-BF Scalper EA
Ukubuyekezwa kwe-Robot Forex ye-Forex